အိမ်ပေါ်ကြောင်တက် သဂျီးမှတ် fortune | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Relationships & Family » အိမ်ပေါ်ကြောင်တက် သဂျီးမှတ် fortune
အိမ်ပေါ်ကြောင်တက် သဂျီးမှတ် fortune
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Dec 25, 2012 in Relationships & Family | 11 comments
ဒေါက်..ဒေါက်..ဒေါက်.. ဆရာသွပ် ဆရာသွပ် ထပါအုံးဗျ၊ ကျနော် ဦးခိုင်ပါ။ ကရင်စည်သွပ် ကမန်းကတန်း အိပ်ယာမှ လူးလဲထလိုက်ရသည်။ အလို ဘယ့်နှယ်ဖြစ်ရသတုံး မနက်အစောကြီး မိုးတောင် ကောင်းကောင်း မလင်းသေးဘူး။ သဂျီးနှင့် သဂျီးဂဒေါ်တို့အား အိမ်တံခါးဝတွင် တွေ့လိုက်ရသည်။ ဆိုပါအုံး ဘာကိတ်….. ဒီလိုပါ ဆရာသွပ် ကျနော့်အိမ်ဦးခန်း ကြောင်ကြီးတကောင်ရောက်နေလို့၊ မောင်းချလို့လည်း မရဘူး၊ သူ့အိမ် သူ့ယာမှတ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ၊ အဲဒါ ဘယ်လို အတိတ်နမိတ် ရှိသလဲ သိချင်လို့ပါ။ ကြောင်ကြီးမှ အကြီးကြီးပဲ ဆရာ၊ ကျနော်အနားကပ်ရင် မာန်ဖီတယ်၊ သွားကိုင်ရင် လက်သဲနဲ့ကုတ်တယ်။ သမီးလေးခိုင် တယောက်ပဲ အနားကပ်လို့ရတယ်။ သူ့နဲ့ကြတော့ တည့်လိုက်တာ.. သမီးလေး ကံဇာတာ တက်နေပြီထင်တယ်..။
သဂျီးဦးခိုင် သမီးဇောဖြင့် မစားရဝခမန်း မျှော်လင့်ချက်တကြီး မေးလေသည်။ နေပါအုံး ဦးခိုင် အရင်တုံးက အတိတ်တဘောင် ဗေဒင်နက္ခတ် မယုံဘူး ပြောသလားလို့။ ဆရာဂျီးရယ် ဒီလိုရှိပါတယ်၊ ကျနော် မေးခဲ့ဖူးတဲ့ ဗေဒင်အကြွေး ပြန်ဆပ်ရမှာစိုးလို့ ကြိုကာထားတဲ့ သဘောပါ။ တကယ်တော့ ဗေဒင်သာမက ရှေးနောက်ဘဝ ငရဲနတ်ပြည် ယုံပါတယ်။ အကုသိုလ် သိပ်ကြီးမှန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိနေတော့ သုဂတိဘုံ မလားမဲ့အတူတူ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ့ပက်၊ မမှီတဲ့ စပျစ်သီးခိုင် ချဉ်မိပါတယ်။ ဗွေမယူပါနဲ့ခင်ဗျာ။
ကရင်စည်သွပ် အတိတ်နမိတ်ဖတ်ရန် အာရုံသွင်းလိုက်သည်။ ညက ဘီယာအသောက်များ၍ ရိုးတိုးရိပ်တိပ် ပုံရိပ်များသာ မြင်နေရသည်။ သေချာကြည့်လိုက်မှ အလို… ညကတွေ့ခဲ့သော ကာရာအိုကေစင်မြင့်ထက်မှ အလန်းလေးများအား စိတ်စွဲမြင်နေခြင်းဖြစ်၏။ အဟမ်း… အဲဒီကြောင်က ကြောင်ထီးကြီး ….ငါးကြော်လည်း သိပ်ကြိုက်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ၊ ဒက်ထိပါပဲ။ ဒါဆိုသေချာပြီ ဦးခိုင်တို့လင်မယားအတွက် အားကိုးရတဲ့ သားရတနာ ထွန်းကားမည့် နမိတ်ပဲ၊ ဝမ်းသာပေတော့။ သဂျီးဂဒေါ် ခေါင်းငုံ့၍ ရှက်ပြုံး ပြုံးနေသလောက် ဦးခိုင် မှာမူ သွားကြီးဖြီးကာနေသည်။ မိန်းမရေ.. မစားရက် မသောက်ရက် ငါ ဝယ်သောက်ခဲ့တဲ့ ဗီယာဂရာဆေးဖိုး ကြေပြီကွ…။
May I bring good fortune to Little Princess Kai !!!!
ပိုသေချာစေချင်ရင် အဲဒီကြောင်ကြီးကို ရွှေချပြီး အိမ်ဦးခန်းမှာ စင်တင်ပူဇော်ထား… မနက်စာ၊ ညစာကိုလည်း ကိုယ့်အထဲက ဦးဦးဖျားဖျားကျွေး။ ညအိပ်ရင်လည်း ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြု၊ ကြောင်သန်းတုပ်ပြီးမှ အိပ်ကြရမယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက သမီးတော်လေးနဲ့ အတူတူ ဆော့ကစား ပလေ့စေ။ အဲဒီအတိုင်း မပျက်မကွက် လုပ်လို့ ထူးမလာရင် ပြောချင်တိုင်းပြော။
လူဆိုသည်မှာ မျှော်လင့်ချက်ဖြင့် အသက်ရှင်သည်မို့ အိုမင်းမစွမ်း ကြီးတောင့်ကြီးမား ဖြစ်မှ ငယ်မူငယ်သွေး ပြန်ချင်သော ဦးခိုင် ဆန္ဒပြည့်မည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ် ဘာလောညာလော… ရွာသားများ နားစွင့်နေရန် မှတပါး အခြားမရှိချေပြီ….။ :harr:
အိမ်ခေါင်မိုးလဒလာနားရင်.. “ငါ့လဒမည်သူမှမထိရ”ဆိုပြီး.. တက်ဖမ်း..Animal Care & Control ကို ဖုံးဆက်.. အပ်မယ်..။
ပြီးရင်.. ရတဲ့ငွေနဲ့..မြန်မာပြည်မှာ.. မူလတန်းကျောင်းဆောက်မယ်..။ :harr:
ကြောင်ဆိုရင်တော့.. ရွှေမချပါဘူး.. ပိုင်ရှင်ရှိမရှိ..လည်ပါတ်ကြိုးတွေ..ဘာတွေစစ်ရမယ်..။
အေဘီစီ စတောက်နဲ့ဖီးကြမ်းငှက်ပျောသီး မှည့်မှည့်တစ်လုံး
ဦးကြောင်ရေ.. နိပ်သဟ.. သဂျီးကိုရင့်ကို အခုတခါလဲ ဗေဒင်အကြွေးမပေးသွားဘူး။
ကျားနွယ်ဝင်ကြောင် အရုပ်ကလေးများ လက်ယပ်နေသော ကြေးမုံဂျီးမှ အကြံနဲ့
မြန်မာပြည်အား တင်သွားလာတဲ့ ကြောင် လပ်ကီးရုပ်ကလေးများကို အရင်က ဈေးဆိုင်တွေမှာ
အများအားဖြင့် မာဆပ်နဲ့ ကေတီဗီ ကောင်တာတွေမှာ တွေ့မိတာပါပဲ…။
တရုတ်ကြီးက မြန်မာဆီက တွင်းထွက်သံယံဇာတတွေယူတယ်… မြန်မာပြည်ကို
ကော်ဘတ်ထရီကြောင်ရုပ်တွေ ပြန်သွင်းပေးတယ်…။ ဒီတော့
လပ်ကီး ကြောင်မှာ တွင်းထွက်သံယံဇာတနဲ့ တန်ဖိုးညီမျှသည်ဟုမှတ်ယူစေချင်ကြောင်း..
ကောင်တာတွင် ကြောင်ရုပ်ထားသည့် မာဆပ်ကေတီဗီများတွင် ညအခါ အားပေးသူအများနှင့် ပြည့်လျှံနေသည့်အတွက်
သဂျီးအိမ်ဦးခန်းတက်နေတဲ့ ကြောင်က ကြောင်ပါးကြီး ခင်ဗျ :-)
ကိုကြောင်ကြီးက သူ့ ပူံကို ကြံကြံဖန်ဖန် ရွေးလဲရွေးတတ်တယ် လေးစားပါ၏
အားပေးသွားပါ၏။ ထိုကြောင်မှာ အရေခွံဆုတ်ပြီး ဆေးစီရင်ပါက ကာယသိဒ္ဓိ ပေါက်မြောက်နိုင်သည်ဟု သိရသော ကြောင်နက်ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်မျက်ရှင်ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။
အလကား နောက်ထှာ။ ဝင်ပြောကြည့်လိုက်တာ။
သဂျီး အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့ ကြောင်ကြီးနဲ့
နှစ်ပေါက် တစ်ပေါက် ရိုက်တယ် ထင်ပါတယ် …
ကိုယ့်ဖက်ကိုယ်ယက်တဲ့ ကြောင်မျိုး လို့…….